Iindaba - ezintsha ngokudibeneyo kunye nokuxhotyiswa kwetekhnoloji yedijithali
Okwangoku, inguqu yedijithali iye yaba yimvumelwano yamashishini, kodwa ejongene netekhnoloji engapheliyo yedijithali, indlela yokwenza itekhnoloji idlale eyona nzuzo inkulu kwishishini lishishini liyimpazamo kunye nomceli mngeni ojamelene namashishini amaninzi. Kule meko, ngexesha leNgqungquthela ye-Schneider Electric Innovation yakutshanje, intatheli yenza udliwanondlebe noZhang Lei, usekela-mongameli weSchneider Electric kunye nentloko yeshishini lenkonzo yedijithali e-China.
UZhang Lei (wokuqala ukusuka ekhohlo) kwiforum ejikelezayo "yokudibanisa ngokudibeneyo kunye nokuxhotyiswa kwetekhnoloji yedijithali"
UZhang Lei uthe kwinkqubo yotshintsho lwedijithali, amashishini ahlala ejongene nemiceli mngeni emithathu. Okokuqala, amashishini amaninzi kukusilela kwinqanaba loyilo oluphezulu kwinkqubo yenguqu yedijithali, andazi ukuba kutheni ukwenza ikhompyuter, kwaye ungacingi ngokupheleleyo ngokubaluleka kwedijithali ekusebenzeni kwamashishini. Okwesibini, amashishini amaninzi awadibanisi idatha kunye nemeko zeshishini, kwaye awamiseli amandla ohlalutyo, enza ukuba idatha ingakwazi ukuba lulwazi oluxhasa ukwenziwa kwezigqibo. Okwesithathu, iyayityeshela into yokuba inkqubo yenguqu yedijithali ikwayinkqubo yotshintsho kumbutho.
UZhang Lei ukholelwa ekubeni ukusombulula ukudideka kwamashishini kutshintsho lwedijithali, ukongeza kwitekhnoloji yedijithali kunye nokukwazi, ikwafuna umjikelo opheleleyo kunye neenkonzo zedijithali eziphuculweyo.
Njengeshishini eliyintloko lenkonzo yedijithali, inkonzo yedijithali kaSchneider Electric ikakhulu inamanqanaba amane. Eyokuqala yinkonzo yokubonisana, enceda abathengi babone ukuba bafuna ntoni kwaye zeziphi iingxaki ezikhoyo kwishishini leshishini. Eyesibini ziinkonzo zokucwangciswa kwemveliso. Kule nkonzo, uSchneider Electric uza kusebenza nabathengi ekucwangciseni umxholo wenkonzo, ukumisela esona sisombululo sisona silungileyo, esona sisebenzayo nesona sizinzileyo, sinceda abathengi bakhethe izisombululo ezinobuchule ezifanelekileyo, ukunciphisa isantya kunye neempazamo umjikelo, kunye nokunciphisa Utyalomali olungeyomfuneko. Eyesithathu yinkonzo yokuhlalutya idatha, esebenzisa ulwazi lobungcali lweSchneider iingcali zeshishini lombane, zidityaniswe nedatha yabathengi, ngokuqonda idatha, ukunceda abathengi ukuba bahlalutye iingxaki. Inkonzo yesine ikwisiza. Umzekelo, bonelela ngokufaka umnyango nomnyango, ukulungisa ingxaki kunye nezinye iinkonzo ukugcina izixhobo zikwimeko entle yokusebenza kwexesha elide.
Xa kuziwa kwinkonzo esizeni, uZhang Lei ukholelwa ukuba kubanikezeli beenkonzo, ukubanceda abathengi ekusombululeni iingxaki, kufuneka baye kwindawo yabathengi kwaye bafumane zonke iingxaki ezikule ndawo, ezinje ngeempawu zeemveliso ezisetyenzisiweyo. intsimi, yintoni isakhiwo samandla, kwaye yintoni inkqubo yokuvelisa. Bonke kufuneka baqonde, baphumelele, bafumane kwaye basombulule iingxaki.
Kwinkqubo yokunceda amashishini ukuba enze utshintsho lwedijithali, ababoneleli ngeenkonzo kufuneka babe nokuqonda okuqinisekileyo kokubini kwitekhnoloji kunye nemeko zeshishini. Ukuza kuthi ga ngoku, ababoneleli ngeenkonzo kufuneka basebenze nzima kubume beziko, imodeli yeshishini kunye noqeqesho lwabasebenzi.
"Kwinkqubo yombutho kaSchneider Electric, sihlala sikhuthaza kwaye siqinisa umgaqo wokudibana. Xa sijonga nayiphi na uyilo loyilo kunye nokuyilwa kwetekhnoloji, siqwalasela amasebe ohlukeneyo eshishini kunye, ”utshilo uZhang. Beka imigangatho eyahlukeneyo yeshishini kunye nemveliso ukwenza isakhelo ngokubanzi, uthabathe yonke imeko ekuqwalaselweni. Ukongeza, sikwaqhoboshela ukubaluleka okukhulu kulimo lwabantu, ngethemba lokuguqula wonke umntu abe ziitalente zedijithali. Sikhuthaza oogxa bethu abenza isoftware kunye nezixhobo zehardware ukuba babe nokucinga kwidijithali. Ngoqeqesho lwethu, inkcazo yemveliso kunye nokuya kwindawo yabathengi kunye, sinokuqonda iimfuno zabathengi kwicandelo ledijithali kunye nokudibanisa neemveliso zethu esele zikho. Singakhuthaza kwaye sidibane omnye nomnye. ”
UZhang Lei uthe kwinkqubo yotshintsho lwedijithali yeshishini, indlela yokufezekisa ibhalansi phakathi kwezibonelelo kunye neendleko ngumba obalulekileyo. Inkonzo yeDijithali ayisiyo inkqubo yexesha elifutshane, kodwa yinkqubo yexesha elide. Inxulumene nomjikelo wobomi bonke besixhobo, ukusukela kwiminyaka emihlanu ukuya kwiminyaka elishumi.
“Ukusuka kule nkalo, nangona kuzakubakho utyalomali kunyaka wokuqala, izibonelelo ziya kuthi chu zibonakale kuyo yonke inkqubo yokusebenza okuqhubekayo. Ukongeza, ukongeza kwizibonelelo ezithe ngqo, abathengi baya kufumana nezinye izibonelelo. Umzekelo, banokuphonononga imodeli entsha yeshishini ukuguqula ngokuthe ngcembe ishishini labo kwishishini elonyukayo. Siyifumene le meko emva kokusebenzisana namaqabane amaninzi. ”Utshilo uZhang Lei. (Eli nqaku likhethwe kuqoqosho mihla le, intatheli u-yuan Yong)